Civic တာဝန် | USAHello ထံမှနိုင်ငံသားအရင်းအမြစ်များကို | USAHello
သငျသညျနိုင်ငံသားအဖြစ်စဉ်းစားနေကြတယ်? အမေရိကန်နိုင်ငံသားအတူပါလာသည်ဟုအများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါတယ်. သို့သော်လူထုတာဝန်လည်းရှိပါတယ်. အားလုံးအမေရိကန်တွေဟာသူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုရန်ရှိသည်သောလူထုတာဝန်အကြောင်းကိုလေ့လာပါ.
ယင်းကိုတန်ဖိုးထားနှင့်အတူ အမေရိကန်နိုင်ငံသား၏အကျိုးကျေးဇူးများကို, အားလုံးနိုင်ငံသားတွေဟာသူတို့ရဲ့လူထုတာဝန်သတိထားရပါမည်.
သင်တစ်ဦးနိုင်ငံသားဖြစ်လာသည့်အခါ, သငျသညျသစ္စာ၏ကျိန်ဆိုယူပါလိမ့်မယ် (သစ္စာရှိခြင်း) အမေရိက၏ United States ကို. အဆိုပါကြိနျဆိုသင်တစ်ဦးနိုင်ငံသားဖြစ်လာနိုင်ရန်အတွက်အချို့သောအမှုအရာကတိပေးထားပါသည်ပြောပါတယ်:
မဲပေးပိုင်ခွင့်နှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံသား၏အကျိုးကျေးဇူးများတစ်ခုဖြစ်သည်နေစဉ်, များစွာသောလူမဲပေးလည်းအရေးပါသောတာဝန်ယူမှုယုံကြည်. သင်ကြား USA တွင်မဲပေးပုံကို.
ဒါဟာအစိုးရ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်အခွန်ပေးဆောင်ဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားများ၏တာဝန်ဖြစ်ပါသည်, ကာကွယ်မှု, နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ. အားလုံးအမေရိကန်နိုင်ငံသားများအခွန်အချို့ကိုမျိုးပေးဆောင်. ရေခြားမြေခြားနေသောအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေသူတို့အခွန်ပေးဆောင်ကြသည်မဟုတ်လျှင်ပင်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအခွန်ပြန်လာ file ရန်ရှိသည်. အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ USA တွင်အခွန်.
သင့်ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းအတွက် Civic တာဝန်
ယူအက်စ်အေဒီမိုကရေစီဖြစ်ပါတယ်, နှင့်ဒီမိုကရေစီကလူတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့သောစကားသံရှိသည်ဖို့နှင့်အတူတကွအလုပ်လုပ်ရန်မလိုအပ်. အကောင်းတစ်ဦးနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းသည်သင်၏အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုတက်ကြွအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်. ဒါဟာဆက်သွယ်မှုဖွဲ့စည်းရန်နှင့်အသစ်သောတိုင်းပြည်တွင်မိမိတို့၏နေရာအရပ်တွေ့ရှိရန်သူတို့ကိုခွင့်ပြုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကပါဝင်မှုဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်အထူးအရေးကြီးပါတယ်. သငျသညျအသိုင်းအဝိုင်းအုပ်စုများသို့မဟုတ်နိုင်ငံရေးပါတီများပူးပေါင်းနိုင်ပါတယ်. သင်သည်သင်၏ပတ်ဝန်းကျင်သို့မဟုတ်ရပ်ကွက်အတွင်းတစ်အကြောင်းမရှိထောကျပံ့နိုငျ. သငျသညျအများပြည်သူရုံးများအတွက် run နိုင်ပါတယ်.